Sorona Masina ny 14/08/2018 - Katolika Malagasy
Sorona Masina ny 14/08/2018
Ezek. 2, 8 — 3, 4
Hano io taratasy io. Dia nohaniko izany, ka mamy ohatra ny tantely izy tao am-bavako.
Hoy ny Tompo tamiko: “Ary ianao, ry zanak’olona, henoy izao lazaiko aminao izao: Aza miodina tahaka izany taranaka miodina izany. Sokafy ny vavanao, ka hano izay omeko anao.” Dia nojereko, ka indro nisy tanana natsotra nankaty amiko, ary indro fa nitana horonan-taratasy. Novelariny teo anoloako io, ka voasoratra ny tao anatiny sy ny teo ivelany; ary hira fisaorana amam-pitomaniana sy fitarainana no voasoratra teo. Hoy Izy tamiko: “Ry zanak’olona, hano io hitanao eo anoloanao io; hano io taratasy io, dia mandehana miteny amin’ny taranak’i Israely.” Nosokafako ny vavako, dia nafahany ahy io taratasy io; ka hoy Izy tamiko: “Ry zanak’olona, vokiso ny kibonao, ary fenoy itý taratasy atolotro anao itý ny tsinainao.” Dia nohaniko izany, ka mamy hoatra ny tantely izy tao am-bavako. Ary hoy Izy tamiko: “Ry zanak’olona, mandehana mankany amin’ny taranak’i Israely, ary lazao aminy ny teniko.”
Salamo 118, 14 sy 24. 72 sy 103. 111 sy 131.
Fiv.: Endrey, mamin’ny lanilaniko ny didinao.
Soa ho ahy ny lalàna avy amin’ny vavanao, mihoatra ny volamena sy volafotsy arivoarivo! Endrey! mamin’ny lanilaniko ny didinao, ary tsara amin’ny vavako manoatra ny tantely.
Ny fanambarànao no lovako, ry Ilay mandrakizay: izy no fifalifalian’ny foko! Misokatra ny vavako: miemponempona aho; ny baikonao no mahaliana ahy.
Det. 31, 1-8
Mahereza ianao, ry Jôsoe, ary aoka hatanjaka tsara fa ianao no hampiditra itý vahoaka itý any amin’ny tany nampanantenaina.
Niainga i Môizy, ary hoy ny teniny tamin’ny vahoakan’i Israely rehetra: “Efa roapolo amby zato taona androany aho izao, ka tsy afaka mivoaka sy miditra intsony, ary ny Tompo efa nilaza tamiko hoe: Tsy hita an’io Jordany io ianao. Ny Tompo Andriamanitrao no hita eo alohanao. Izy no handringana ireo firenena ireo eo anoloanao, ka dia hahazo azy ireo ianao. I Jôsoe no hita eo alohanao, araka ny voalazan’ny Tompo. Toy ny nataon’ny Tompo tamin’i Sehôna sy Oga, mpanjakan’ny Amôreana, izay naringany mbamin’ny taniny, no hataony amin’ireo koa. Hatolotry ny Tompo aminareo izy, ka ataovy araka ny lalàna rehetra nandidiako anareo. Mahereza ary matanjaha tsara, fa aza matahotra na mimalo amin’ireo akory, satria ny Tompo Andriamanitrao no miara-mandeha aminao, tsy hahafoy anao Izy na handao anao.”
Dia nantsoin’i Môizy i Jôsoe, ka hoy izy taminy, teo anatrehan’i Israely rehetra: “Mahereza ary matanjaha tsara, fa ianao no hiditra miaraka amin’itý vahoaka itý, any amin’ny tany efa nianianan’ny Tompo tamin’ny razany homena azy ireo; ary ianao no hampanana azy ireo izany. Fa ny Tompo no handeha eo alohanao, Izy no homba anao fa tsy hahafoy anao na handao anao Izy, ka aza matahotra na mivadi-po ianao.”
Salamo: Det. 32, 3-4a. 7. 8. 9. sy 12
Fiv.: Ny vahoakany no zaran’ny Tompo.
Ny Anaran’Izy Tompo no antsoiko, hobio ny fiandrianan’Andriamanitra. Fa Izy Vatolampy soa ny asany. He rariny izay lalana soritany.
Tsarovy irony andro fahagola re. Todiho ireny taona nifanaraka. Resaho ny rainareo fa hatorony, resaho koa ny Ntaolo fa hambarany.
Ilay Avo raha nanao ny firenena: nizara ny taranak’olombelona, nametra ny vahoaka isan-tokony manaraka ny fokon’i Israely.
Ny lova ho Azy Tompo dia ny olony, Jakôba nofidiny ho anjara lovany. Ny Tompo no hany afaka mitsimbina. Tsy manana andriamani-kafa ny olony.
Mitoetra be dia be ao anatinareo ny tenin’i Kristy. Isaory Andriamanitra Ray amin’ny alalan’i Kristy.
Mt. 18, 1-5. 10. 12-14
Tandremo sao ataonareo tsinontsinona na dia ny anankiray amin’ireny madinika ireny aza.
Tamin’izany andro izany, nanatona an’i Jesoa ny mpianany ary nanao taminy hoe: “Iza moa no ambony indrindra amin’ny fanjakan’ny lanitra?” Dia niantso zazalahy kely anankiray i Jesoa ka napetrany teo afovoany ary hoy Izy: “Lazaiko marina aminareo fa raha tsy miova ianareo ka tsy tonga tahaka ny zazakely, dia tsy hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra akory. Koa amin’izany, na iza na iza hanetry tena tahaka itý zazakely itý, dia izy no lehibe indrindra amin’ny fanjakan’ny lanitra. Ary izay handray zazakely anankiray tahaka itý amin’ny Anarako, dia mandray Ahy koa. Tandremo sao ataonareo tsinontsinona na dia ny anankiray amin’ireny madinika ireny aza; fa lazaiko aminareo fa ny Anjelin’izy ireny any an-danitra dia mahita lalandava ny tarehin’ny Raiko izay any an-danitra. Ahoana ny hevitrareo? Raha misy olona manana ondry zato, ka nania ny anankiray, moa tsy havelany eny an-tendrombohitra va ny sivy amby sivifolo, ka handeha hitady ilay nania izy? Ary raha sendra hitany izy, dia lazaiko marina aminareo fa iny anankiray iny aza no mahafaly azy noho ny sivy amby sivifolo tsy nania. Toy izany koa, tsy tian’ny Rainareo izay any an-danitra hisy very na dia anankiray amin’ireo madinika ireo aza.”